स्वास्थ्य र जीवनशैली Archives - Page4of 20 - Naya Patrika
यसकारण आँखाबाट पानी बग्छ
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, २१ चैत - आँखामा आई लिड हुन्छ, जहाँ आँसु उत्पादन गर्ने ग्रन्थि हुन्छ । र, आँखा छेउको तल–माथि दुवैतिर प्वाल हुन्छ । ग्रन्थिले आँसु उत्पादन गर्छ र प्वालबाट सप्लाई हुन्छ । आँखाको सेतो भागमा पनि यसरी नै पानी सप्लाई हुन्छ । यसका साथै नाकलगायत शरीरका अन्य भागमा पनि प्वालका माध्यमबाट पानी सप्लाई हुने...
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, २१ चैत - बाहिरी, मध्य र भित्री गरी कानका तीन भाग हुन्छन् । राम्रोसँग हेरचाह नहुँदा तीनवटै भागमा विभिन्न संक्रमण हुने गर्छ । बाहिरी कानको राम्रोसँग हेरचाह गर्न नसके फ्रुङ्कोलोसिसजस्ता संक्रमण हुन्छ । मध्यकान अझ बढी संवेदनशील हुन्छ । जसमा आउने समस्यालाई ध्यान नदिए बहिरोसमेत बनाउन सक्छ । यी हुन् कानमा देखिने संक्रमण...
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं, २० चैत - मोबाइल हाम्रो जीवनशैलीको महत्वपूर्ण पाटो बनिसकेको छ । मानिसका हातमा एउटा होइन, विभिन्न ब्रान्डका २–३ वटा मोबाइल हुन थालेका छन् । तर, हजारौँ मूल्यका यी सामग्री सामान्य कुरामा ख्याल गर्न नसक्दा चाँडै बिग्रन सक्छन् । केही त्यस्ता सामान्य कुरा, जसको ख्याल गर्ने हो भने हाम्रो मोबाइल धेरै वर्ष टिक्न सक्छ...
दिशा पटानी, काठमाडौं, २० चैत - दिशा पटानी बलिउडमा पछिल्लो समय चर्चामा रहेकी अभिनेत्री हुन् । उनी अभिनीत ‘बागी २’ अहिले विश्वभरका सिनेमा हलहरूमा प्रदर्शन भइरहेको छ । सन् २०१५ मा तेलगु फिल्म ‘लोफर’ मार्फत अभिनय यात्रा सुरु गरेकी दिशाले त्यसयता करिअरमा पछाडि फर्कनुपरेको छैन । आफ्नो सौन्दर्यका कारण धेरैको मन जित्न सफल दिशा नियमित डाइट...
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं, २० चैत - वाइफर लेडिज ग्लासका सेप भेराइटी अलि बढी हुन्छ । तर, जेन्सका भने कम हुन्छ । जेन्सका लागि एउटा सेप हो, वाइफर । यस्तो ग्लास स्याडो ब्राउन, ब्ल्याक, मर्करी, ब्लु, सिल्भर, एल्लो कलरमा पाउन सकिन्छ । एभिएटर पछिल्लो समय एभिएटर र वेफर सेपको ग्लास बढी प्रचलनमा छ । यिनको माग पनि...
बोनम्यारोपीडित १३ वर्षीय बालकले रुँदै भने ‘मलाई बचाउनुस्, बाँचेँ भने गुन तिरौँला’
राजकुमार गोले/नयाँ पत्रिका, काभ्रे, २० चैत - रोशी गाउँपालिका–४ महादेवटारका १३ वर्षीय बालक राजु रखाल मगरको आर्थिक अभावमा उपचार हुन सकेको छैन । विष्णुबहादुर रखाल मगरका छोरा राजु विगत चार महिनादेखि बोनम्यारो रोगबाट पीडित छन् । किताब–कापी बोकेर स्कुल जाने उमेरमा उनले अस्पताल धाउनुपरेको छ । उनी सँगैका साथी यतिवेला वार्षिक परीक्षा दिइरहेका छन् । उनी भने...
१४ जिल्लाका ४२ हजारले पाए निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा सेवा
मुना कुँवर/नयाँ पत्रिका, काठमाडौ, २० चैत - दुई वर्षभित्र सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा सेवा दिइने पैसा नभएकै कारण अब कोही व्यक्ति स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित हुनु नपर्ने भएको छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले अतिगरिबलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा सेवा प्रदान गर्न थालेपछि पैसा नहुनले पनि स्वास्थ्य उपचार पाउने भएका हुन् । २०७२ सालको अन्त्यदेखि सुरु गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा...
क्यान्सर पत्ता लगाउने ‘एम्क्याड–भिटी’ भित्रियो
नयाँ पत्रिका , काठमाडौं, २० चैत - नेपाल हेल्थ केयर सोलुसनले थाइराइड क्यान्सर पत्ता लगाउने एम्क्याड भिटी मेसिन नेपालमा भित्र्याएको छ । सो प्रविधिको प्रयोग वीर अस्पतालबाट सुरु गर्ने नेपाल रेडियोलोजिस्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. स्वयंप्रकाश पण्डितले बताएका छन् । ‘एम्क्याड–भिटी’ नामक सो अल्ट्रासाउन्ड मेसिनको माध्यमबाट क्यान्सर कुन चरणमा छ भन्ने सहजै पत्ता लाग्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन् ।...
स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकमा डा. लोहनी
नयाँ पत्रिका , काठमाडौं, २० चैत - स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालले मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायमा कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरेकी छिन् । यही क्रममा एक महिनादेखि रिक्त स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकमा डा. गुणराज लोहनी नियुक्त भएका छन् । लोहनी यसअघि सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा बिमा समितिका निर्देशक थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलोपटक विवादरहित व्यक्तिलाई महानिर्देशक बनाएको छ । डा. लोहनी...
स्वास्थ्य बिमा, विपन्नलाई वरदान
मनीष खड्का/नयाँ पत्रिका, रुकुम, २० चैत - भिरबाट लडेर खुट्टा भाँचिएका भेरी नगरपालिका–३, जाजरकोटका ३५ वर्षीय वीरबहादुर नेपाली पैसाको जोहो गर्नतिर नलागी हतारहतार अस्पताल पुगे । दुई सातादेखि रुकुम (पश्चिम)स्थित चौरजहारी अस्पतालमा खुट्टासँगै बाथ रोगको उपचार गरिरहेका उनले भने, ‘डाक्टरसाबले पैसाको चिन्ता नगर्नु, राम्रोसँग उपचार गरेर मात्रै घर फर्किनु भनेका छन् ।’ [caption id="attachment_36752" align="alignnone" width="960"] चौरजहारी...
सुत्केरीपछि तौल कम गर्न यस्ता गतिविधि उपयुक्त
नयाँ पत्रिका , काठमाडौं, १९ चैत - गर्भावस्थाका वेला महिलाको शरीरमा कैयौँ परिवर्तन आउँछन् । बच्चा जन्माएपछि आमाको पाचन प्रक्रियामा समेत प्रभाव पर्न जान्छ । महिलाले गर्भावस्थादेखि डेलिभरीको समयसम्म विभिन्न समस्याको सिकार बन्नुपर्ने हुन्छ । प्रेग्नेन्सी र डेलिभरीपछि प्रायः महिला मोटाउने गर्छन् । त्यसैले डेलिभरीपछि तौल कम गर्न निकै गाह्रो हुन सक्छ । उसो त आमाले बच्चाको...
कपालमा समस्या छ ? यसो गर्नुहोस्
नयाँ पत्रिका , काठमाडौं, १९ चैत - कपालको समस्याबाट धेरै मानिस तनावमा हुन्छन् । कपालमा थुप्रै समस्या देखिन सक्छन्, जस्तै– कपाल झर्ने, खैरो बन्ने, सेतो, रुखो हुने आदि । कपालको यस्ता समस्या धेरैका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्छ । मुलायम र राम्रो कपालले मानिसलाई स्टाइलिस देखाउन सहयोग गर्छ । तर, यस्ता समस्याबाट बच्नचाहिँ सम्भव छ । त्यसका...
सपनामा यसकारण बोल्छ मानिस
नयाँ पत्रिका , काठमाडौं, १९ चैत - कतिपयले सपनालाई शुभ–अशुभको संकेतका रूपमा लिन्छन् । कतिले सपनालाई भविष्यको सूचकका रूपमा पनि व्याख्या गर्छन् । मानिसले सपनासम्बन्धी अनेक व्याख्या, विश्लेषण गरे पनि विशेषज्ञहरू सपनालाई दैनिक गतिविधिको आवृत्ति भएको उल्लेख गर्छन् । विशेषतः जीवनमा गर्न नसकेका काम, तनाव, डरलाग्दा घटनाका कारण नराम्रा सपना देख्ने गरिन्छ । जसकारण मानिस सपनामा बर्बराउने,...
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, १८ चैत - बाँझोपन महिला तथा पुरुषमा हुने जटिल समस्या हो । सन्तान उत्पादन गर्न नसक्ने भएकाले यस्तो समस्याले मानिसलाई अत्यधिक पीडासमेत दिने गर्छ । कतिपय बाँझोपनलाई औषधिको सहायताले समाधान गर्न सकिन्छ भने कतिको उपचार नै सम्भव हुँदैन । विशेषगरी महिलामा हुने बाँझोपनलाई तीन भागमा वर्गीकरण गरेर हेर्न सकिन्छ । यी हुन् महिलामा...
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, १८ चैत - ओशो रजनीश आध्यात्मिक गुरु तथा दार्शनिक हुन् । ११ डिसेम्बर १९३१ मा जन्मिएका ओशोले राजनीतिज्ञ, महात्मा गान्धी र संस्थागत धर्मका बारेमा खरो आलोचना गरेका थिए । उनको सुरुवाती नाम चन्द्रमोहन जैन हो । विश्वका धेरै ठाउँमा उनका अनुयायी छन् । उनले सयौँ पुस्तक लेखेका छन् र दर्शन दिएका छन् ।...
नङमा कालो धर्साको संकेत
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, १८ चैत - नङमा कालो धर्सा या प्लेट देखिने विभिन्न कारण हुन्छन् । यद्यपि, सजग हुन आवश्यक हुन्छ । किनकि, यस्ता धर्सा क्यान्सरको लक्षण पनि हुन सक्छ । औषधिको साइड इफेक्टका कारण पनि नङमा कालो प्लेट या धर्सा देखिन सक्छ । महिला गर्भवती हुने समय पनि यस्तो समस्या देखिन्छ । नङमा फंगल इन्फेक्सन...
हिप्स बनाउन एक्सरसाइज
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, १८ चैत - एक्सरसाइजले शरीर सुगठित बनाउन मात्र होइन कि स्वस्थ रहन पनि मद्दत गर्छ । आवश्यकताअनुसार एक्सरसाइज गरी शरीरका विभिन्न भागलाई अकर्षक बनाउन पनि सकिन्छ । [caption id="attachment_36374" align="alignleft" width="150"] विकेश श्रेष्ठ, जिम इन्स्ट्रक्टर[/caption] हरेक अंगलाई आकर्षक बनाउनका लागि फरक–फरक खालका एक्सरसाइजको जरुरी हुन्छ । त्यस्तै, एक्सरसाइज सामग्री पनि फरक–फरक नै प्रयोग...
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, १८ चैत - रातको समय अचानक भोक लागेमा के खाने गर्नुभएको छ ? यस्तो वेला भोक मेटाउन तपाईंले चकलेट वा स्न्याक्सको सहारा लिइरहनुभएको छ भने गलत गर्नुभएको छ । किनकि, रातको समय अत्यधिक सुगर र क्यालोरीयुक्त स्न्याक्स प्रयोग गर्दा स्वास्थ्यमा खराब असर पर्न सक्छ । त्यसैले स्वास्थ्यका लागि यस्तो समयमा फलफूल प्रयोग गर्दा...
चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षामा ७६ प्रतिशत उत्तीर्ण
नयाँ पत्रिका , काठमाडौं, १८ चैत - नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिएको चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षामा ७६.१५ प्रतिशत चिकित्सक उत्तीर्ण भएका छन् । शनिबार भएको परीक्षामा १६ सय ५० जनाले फारम भरे पनि परीक्षामा एमबिबिएस गरेका १६ सय ३८ र बिडिएस गरेका ३०५ गरी १९ सय ४३ जना सहभागी थिए । एमबिबिएसमा १२१४ र बिडिएसमा २६५ जना चिकित्सक उत्तीर्ण...
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, १७ चैत - दाहिने ब्रेस्टको ठीक तल दुख्ने समस्या भएमा स्टमक अल्सर, गोलस्टोनमा पेन्क्रिएटाइटिसजस्ता रोग लाग्न सक्छन् । छातीका दुई करङ जोडिएको भाग अर्थात् नाइटोभन्दा ठीक माथि दुखेमा हर्निया, ग्यास्ट्रिक एसिड, स्टमक अल्सर, पाचन प्रक्रियामा समस्या या गलस्टोनजस्ता रोग लाग्न सक्छन् । नाइटोमाथिको बायाँ भागमा दुखेमा स्टमक अल्सर, पेन्क्रिएटाइटिस या बाइल डक्ट अब्स्ट्रक्सनजस्ता...
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, १७ चैत - मानिसलाई खतराको सम्भावना भएमा शरीरले कुनै न कुनै प्रतिक्रिया देखाउँछ । त्यस्तो अवस्थामा मन आत्तिने, डर लाग्ने असामान्य विषय होइन । तर, सामान्य अवस्थामा पनि अलि बढी नै डरको अनुभूति गर्नु, दैनिक क्रियाकलापलाई असन्तुलन बनाइरहनुले डिसअर्डरको रूप लिन सक्छ, जसलाई एन्जाइटी डिसअर्डर भनिन्छ । यसबारे मनोविज्ञ आदर्श प्रधानले नयाँ पत्रिकालाई...
हाड खिइने जोखिममा महिला
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, १७ चैत - प्रायः मानिसमा हाड खिइने वा पातलो हुने समस्या हुन्छ । यस्तो समस्यालाई ओस्टोपोरोसिस भनिन्छ । यो समस्या पुरुषभन्दा महिलामा बढी देखिन्छ । अझ महिनावारी सुकेका महिलालाई यस्तो समस्याले सताउँछ । विशेष रूपमा ५० वर्षको उमेर पार गरेका महिलामा यस्तो समस्या हुने गर्छ । यसकै कारण ढाड, हिप भाँचिनेलगायत समस्या पनि...
भरतपुर अस्पतालमा इएनटी शल्यक्रियामा नयाँ प्रविधि
नयाँ पत्रिका, चितवन, १७ चैत - कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज शिक्षण अस्पताल (पुरानो मेडिकल कलेज)ले नाक, कान र घाँटी (इएनटी) को शल्यक्रियामा नयाँ प्रविधि प्रयोगमा ल्याएको छ । अस्पतालका इएनटी विभागका प्रमुख डा. जयप्रकाश मैयाँले कलेजले एड्भान्स इन्डोस्कोपी सर्जरी प्रयोगमा ल्याएको जानकारी दिए । भारतका वरिष्ठ चिकित्सक डा. मुबारक खानले पाँच वर्षअघि आविष्कार गरेको उक्त प्रविधि...
पुरुषमा देखिने प्रमुख क्यान्सर
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, १७ चैत - कतिपय क्यान्सर यस्ता हुन्छन्, जुन पुरुषमा बढी देखिन्छन् । यस्ता क्यान्सर महिलामा देख्दै नदेखिने भन्ने चाहिँ होइन । पुरुषको गतिविधि र जीवनशैलीका कारण उनीहरू यस्ता क्यान्सरका जोखिममा भएका हुन् । यी हुन् महिलाभन्दा पुरुषमा बढी देखिने क्यान्सर : मुख, फोक्सो, प्रोस्टेट, पेट, आन्द्रा र छालाको क्यान्सर पुरुषमा बढी देखिने गर्छ...
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, १७ चैत - मस्तिष्कका विशेष भागहरूमा रगत प्रवाहमा बाधा हुँदा मस्तिष्कघात हुने गर्छ । मस्तिष्कका रक्तनलीबाट रक्तश्राव हुँदा पनि अकस्मात् यस्तो समस्या आउने गर्छ । यो गम्भीर समस्या हो । अव्यवस्थित जीवनशैली र अन्य शारीरिक समस्याका कारण मस्तिष्कघात हुने गर्छ । नेपालमा पनि यस्ता बिरामीको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । यस्ता बिरामीको आपत्कालीन...
अनुहारका लागि नरिवलको तेल
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, १७ चैत - नरिवलको तेलले फुस्रो छालाको समस्याबाट छुट्कारा दिन्छ । यसका लागि मह र नरिवलको तेलको मिश्रण बनाएर प्रयोग गर्नुपर्छ । यस्तो मिश्रण लगाएर केही समयसम्म छोड्नुपर्छ र मनतातो पानीले सफा गर्नुपर्छ । घरमै डिप क्लिजिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तरिवलको तेलको सहारा लिन सक्नुहुन्छ । यसका लागि बेकिङ सोडा र नरिवलको...
एन्टिरेबिज भ्याक्सिनको मौज्दात सकियो
अर्जुन अधिकारी/नयाँ पत्रिका, काठमाडौं, १७ चैत - स्वास्थ्य सेवा विभागले समयमै औषधि खरिदप्रक्रिया अघि नबढाउँदा एन्टिरेबिज भ्याक्सिनको मौज्दाद सकिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभाग महानिर्देशक पद रिक्त रहेका कारण औषधि खरिदप्रक्रिया अघि नबढेको हो । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार करिब १५ दिनलाई पुग्ने एन्टिरेबिज भ्याक्सिन मात्रै मौजाद छ । तर, दिनहुँ कुकुरले टोकेका...
क्रिमले कुरूप बनाउन सक्छ
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, १६ चैत - सुन्दर छालाको लागि दाग, धब्बा हटाउन जरुरी हुन्छ । यसका लागि दैनिक क्रिमको प्रयोग गरिन्छ । महिला होस् वा पुरुष, सबैले क्रिमको प्रयोग गर्छन् । अनुहारका हरेक समस्या समाधानका लागि बजारमा कैयौँ क्रिम उपलब्ध छन् । क्रिमले छालालाई मोस्चराइज मात्र गर्दैन, रङमा समेत परिवर्तन ल्याउँछ । तर, कैयौँ यस्ता क्रिम...
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, १६ चैत - मस्तिष्कका विशेष भागहरूमा रगत प्रवाहमा बाधा हुँदा तमस्तिष्कघा हुने गर्छ । मस्तिष्कका रक्तनलीबाट रक्तस्राव हुँदा पनि अकस्मात् यस्तो समस्या आउने गर्छ । मस्तिष्कघातको आपत्कालीन रूपमा उपचार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि बिरामीलाई तुरुन्तै अस्पताल पु-याउनुको विकल्प रहँदैन । नत्र, बिरामीको मृत्यु नै हुन सक्छ । यस्तो रोग निको हुन लामो समय लाग्छ...
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, १६ चैत - गर्मी मौसममा मच्छडको बिगबिगी हुन्छ । विशेषगरी, तराई क्षेत्र र गर्मी ठाउँमा मच्छडको टोकाइबाट बच्न हम्मेहम्मे पर्छ । मच्छडको टोकाइले एलर्जी त बनाउँछ नै, कैयौँ रोगसमेत लाग्न सक्छ । धेरैले मच्छडको टोकाइबाट बच्न मच्छड धूप प्रयोग गर्छन् । जुन स्वास्थ्यका लागि निकै हानिकारक छ । मच्छडको टोकाइबाट बच्न केही घरेलु...
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, १६ चैत - वैज्ञानिकहरूले गरेको एक सर्वेक्षणले मानिसले अवलम्बन गर्ने जीवनशैलीले आयुमा भारी तलमाथि पार्ने देखाएको छ । ६५–७० वर्षको जुनकुनै व्यक्तिले नियमित व्यायाम गरेमा, शुद्ध खाना खाने, धूम्रपान नगर्ने गरेको खण्डमा ९० वर्षसम्म बाँच्न सक्ने सम्भावना रहेको देखाएको छ । उक्त सर्वेक्षणले सक्रिय जीवनशैलीले उमेरको जुनसुकै कालखण्डमा सहयोग पु-याउने देखाएको छ ।...
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, १५ चैत - बाँझोपन हुनुका थुप्रै कारण हुन्छन् । बाँझोपनका लागि कुनै एक कारण मात्र जिम्मेवार हुँदैन । महिला र पुरुष दुवैमा हुने जनेन्द्रियसम्बन्धी समस्याले पनि बाँझोपन हुन सक्छ । त्यसैले गर्भधारण गरी सन्तान जन्माउन नसक्नुमा महिलालाई मात्र दोष दिनु उचित हुँदैन । यस्तो समस्यामा पुरुष पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छन् । यसर्थ, दुवैजनाले...